यसरी सेवन गर्नुहोस् अकबरे खुर्सानी घटाऊछ मोटोपन !! – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीयसरी सेवन गर्नुहोस् अकबरे खुर्सानी घटाऊछ मोटोपन !!
February 6, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8539
मानिसहरू मोटोपनाका कारण चिन्तित देखिन्छन् । मोटोपन घटाउन उनीहरूले जिमदेखि डाइटिङसम्म गर्छन् । तर पनि मोटोपना ज्यूँका त्यूँ हुन्छ ।
त्यस्तै आज हामी तपाईंलाई बिना डाइटिङ मोटोपना कम गराउनका लागि भोजनमा समावेश गर्नुपर्ने केही खानाका परिकारहरूबारे जानकारी दिँदैछौं ।
पालकमा कम मात्रामा क्यालोरी हुन्छ । यसमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, फाइबर र मिनरल्स हुने भएकाले हामीलाई चाहिने पोषक तत्व प्रदान गर्छ । यसले मोटोपना कम गर्न पनि सहयोग पुर्या।उँछ ।
मोटोपना कम गराउन तथा शरीरलाई फिट राख्न माछा सेवन पनि एउटा अप्सन हो । यसमा केही यस्ता तत्व हुन्छन्, जसले शरीर बोसोपना कम गराई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :सेयरका कारण ‘सूर्यवंशी’को प्रदर्शनमा अन्योलता !!:बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको चलचित्र ‘सुर्यवंशी को रिलिज मिति सार्वजनिक हुदै पोस्पेन्ड हुदै आएको छ । ।यस अघि निर्देशक रोहित शेट्टीले चलचित्रको प्रदर्शन मितिलाई अनिश्चितकालका लागि पोस्पेन्ड गरेपछी रिलिज रोकिएको थियो। केही दिन यता अप्रिलमा रिलिज हुने हल्ला चलेपनि फेरी सुर्यवंशी रिलिजमा अन्योलता छाएको छ ।
‘सूर्यवंशी’का निर्माताले हलवालासँग अत्यधिक सेयर मागेका छन्।लकडाउनमा हलवाला तथा फिल्मीकर्ता मारमा परेको भन्दै भारतको केन्द्रिय सरकारले हलमा शत प्रतिशत अकुपेन्सीको अनुमती दिएको छ। जसका कारण पनि निर्माता र प्रदर्शक उत्साहित देखिएका छन् ।
उनीहरुले प्रदर्शकसँग ७० प्रतिशत शेयर माग गरेका छन् । यस्तै, चलचित्र रिलिज भएको ४ सातापछि ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज गर्न पाउनुपर्ने शर्त पिन अगाडि सारिएको छ । यो सर्तका लागि प्रदर्शक र निर्माताविच कुरा मिलेको छैन ।
प्रदर्शकहरु फिल्म रिलिजको ४ सातापछि ओटीटी रिलिजका लागि तयार भएको बुझिएको छ भने ७० प्रतिशत शेयर दिन भने आकाकानी गरेका छन्। निर्माताले ७० प्रतिशत शेयर राख्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि फिल्मको प्रदर्शन मिती अन्योलमा परेको छ। आगामी अप्रिल २ तारिखबाट रिलिज हुने भनिएको फिल्म रिलिज हुने नहुनेमा निश्चित हुन सकेको छैन।
लकडाउन अगाडि निर्माता र प्रदर्शकले ५०–५० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्दै आएका थिए तर यता प्रदर्शकहरु ७० प्रतिशत शेयरको मागले आफूहरुलाई अन्यायमा परेको बताउँछन् ।
February 8, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 4152
January 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 11887
प्याज निकै सजिलै पाइने खाद्य वस्तु हो । धेरैजसो मानिसहरु यसको तिखो गन्ध र काट्दा आँसु आउने भएकाले यसलाई रुचाउँदैनन्। तर प्याज कपालका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। प्याजमा पाइने सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ जसले
January 1, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 7762
हुन त तुलसीको पातले विभिन्न किशिमका स्वास्थ्य समस्याहरुलाई निर्मुल पार्ने गर्दछ।आयुर्वेदमा पनि तुलसीको महत्वका बारेमा निकै चर्चा गरिएको छ। करिब-करिब सबै नेपालीको घरमा तुलसीको पात राखिएको हुन्छ भन्दा अतियूक्ती नहोला। तुलसीको पूजा गर्नुका साथै यसको
LEX 18 agenda conversation: Job club (544600)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515050)